Sawiro: Deni oo ka horyimid sharciyada Doorashada,Shidaalka iyo dib-u-eegista dastuurka ayaa soo jeediyay wadahadal DFS& DGD. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Sawiro: Deni oo ka horyimid sharciyada Doorashada,Shidaalka iyo dib-u-eegista dastuurka ayaa soo...
Sawiro: Deni oo ka horyimid sharciyada Doorashada,Shidaalka iyo dib-u-eegista dastuurka ayaa soo jeediyay wadahadal DFS& DGD.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Maxamed, ayaa ka horyimid hannaanka loo wado dib u-eegista Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, kadib markii uu sheegay in dowlad goboleedyada dalka aan lagala tashan, dib u-eegista lagu samaynayo qodobada masiiriga ah ee Dastuurka.
“ Waxaa muuqata in Dastuurku noqday mashruuc aan dhammaanayn, Puntland waxay caddaynaysaa haddaba, in aysan ku qanacsanayn Nidaamka dib u-eegista Dastuurka, oo ay ahayd in uu ku salaysnaado wada-tashi iyo wada-xaajood siyaasadeed oo loo dhanyahay.” Ayuu yiri Deni.
Madaxweynaha ayaa sheegay, in dowladda Federaalka Soomaaliya, aysan wax wada-tashiya ka siin dowlad goboleedyad hannaanka dib u-eegista Dastuurka KMG ah ee dalka oo u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo, maadaama uu ku jiro arrimaha masiiriga ah.
Deni wuxuu ku baaqay in qawaaniinta, nidaamka dalka iyo wax lagu heshiiyay la ixtiraamo, si isku’haynta dadka Soomaaliyeed loo ilaaliyo, islamarkaana aysan u dhantaalmin wadajirka iyo midnimada dalka.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa sidoo kale shaaciyay in Puntland ay gebi ahaanba qaaddacday Sharciga Batroolka Soomaaliya, oo ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay, in Puntland aan lagala tashan diyaarinta Sharciga Batroolka Soomaaliya, balse ay taladiisa isku koobtay dowladda Federaalka, sidaasi darteedna aysan marnaba Puntland wax ku darsan doonin Sharci kasta oo aan talo laga siin sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu sheegay, in Puntland ay dhowaan soo saari doonto warqad rasmiya oo ay ku qaaddacayso Sharciga Batroolka Soomaaliya, oo sida uu sheegay ay soo diyaarisay dowladda Federaalka, iyadoo aysan wax talo ah ka siin dowlad goboleedyada dalka.
Deni ayaa tilmaamay, in Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya uu dhigayo, in dhammaan arrimaah masiiriga ah ee dalka ay ka wada-tashadaan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah, taasi oo uu ku eedeeyay in dowladda hadda jirtay ay baalmartay.
wuxuu u mahadceliyay mudanayaasha Aqalka sare ee Baarlamanka Federaalka ku matala Puntland oo sida uu sheegay qaadday ansixinta Sharcigaasi Batroolka.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Deni ayaa sidoo kale soo jeedisay, in ay wada-hadal isu’gu yimaadan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka, si loo xalliyo muranka iyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
Deni ayaa sheegay, in Puntland ay diyaar u tahay, in ay marti-geliso shir weyne Wada-tashi ah oo madaxda heer Federaal iyo heer dowlad goboleed, ay kaga wada-hadlaan, kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad-dhiska Soomaaliya.
Shirkii Fashilmay ee Garowe ku dhexmaray Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada Dalka.
Sidoo kale, wuxuu xusay in arrimaha u baahan in laga wada-hadlo ay kamid yihiin; doorashada madaxtinimada dowladda Federaalka ee 2020/2021-da, dhammaystirka Dastuurka KMG ah, qeybsiga Khayraadka iyo deeqaha Caalamiga ah.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada qaarkood waxaa ka dhaxeeya Khilaaf Siyaasadeed oo soo taagnaa Mudo Sanad ka badan waxaana Madaxweyne Deni ku guuldaraysatay in uu xaliyo ka dib kulan Magaalada Garowe ka dhacay ka dib Caleemasaarkiisa.
Next articleXaaf oo DFS ku eedeeyay faragelin, qalalaaso abuurid iyo qafaalashada nidaamka doorashada Galmudug.